Induction Brazing Carbide Kubvisa paKucheka Simbi Chishandiso Zvishandiso
Iyo inotungamira inogadzira CBN uye PCD maturusi ekucheka anoda kuwedzera kwavo kugadzirwa ne Tarisara kupisa on nzvimbo diki kwazvo kuti uzo kuderera kupisa kurasikirwa nekuvandudza a carbide kudonhedza Process.
Induction Kuchengetedza Maitiro:
Mutengi akapa katatu simbi muviri, mativi ese ~ 16.5 mm (0.65 inches). Iyo induction brazing carbide kudhonza Inofanirwa kuitiswa pa 3 mm (0.11 inches) yakaenzana netriangle kumucheto. Iyo yekudziya zone yechishandiso simbi muviri ndeye 43 mm (1.69 inches) OD x 25 mm (0.98 inches) pakureba. DW-UHF-6kW-II kupisa induction system yakashandiswa kusvika 1600 ° F (870 ° C) uye kupedzisa maitiro mumasekondi masere. Iyo yetsika-yakagadzirirwa coil yakaisa kupisa mukati me carbide tipping zone uye yakadzora kutenderera nguva.
DW-UHF-6kW-II kupisa induction system ine yakagadziriswa induction brazing coils yakashandiswa kukodzera maitiro ekuita.
indasitiri: Tools & Zvishandiso
Categories Technologies Tags brazing, brazing carbide, Kuchengetedza Carbide Kudhonza, brazing carbide ichicheka maturusi ekucheka, kusungira kutema induction, zvishandiso zvekucheka brazing, hf kucherwa, kuburitsa kusungurudza, Induction Brazing Carbide Kubvisa, induction brazing yekucheka simbi, induction brazing yekucheka maturusi Post navigation